Qalabka Twitter si aad u soo dejiso dhammaan fariimahaaga | Laga soo bilaabo Linux
Qalabka Twitter si aad u soo dejiso dhammaan fariimahaaga
Twitter wuxuu mar hore faallo ka bixiyay waqti ka hor abuurista a qalab si aad u soo dejiso dhammaan fariimahaaga. Ahaa Agaasimaha guud, Dick Costolo qofkastoo xusay intaas kahor dhamaadka sanadka a qalab si aad u soo dejiso dhammaan fariimahaaga.
Maanta Twitter wuxuu bilaabay inuu awood u yeesho qalab si aad u soo dejiso dhammaan fariimahaaga adeegsadayaasha qaarkood, in kasta oo aan wali la wada helin, haddana waxa la filayaa inay si tartiib tartiib ah ugu hawlgeli doonto dhammaan shabakadda.
Taas awgeed, waxay marka hore noo soo diri doonaan emayl ogeysiinaya hawsha adeeggan, oo markaa kaliya ayaan awoodi doonnaa inaan ku aragno ikhtiyaarka aagga qaabeynta ee xisaabteenna twitter-ka. Si aad udhaqaajiso xulashada waa inaan gujino "Diiwaankaaga Twitter".
Marka aad dhaqaajiso ka "Diiwaankaaga Twitter" heli doonaa emayl leh xiriiriyaha si soo dejiso taariikhda tweet qaab html ah oo lagugu cadaadiyey sibib, ama waxaad kala soo bixi kartaa koontadaada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » dhowr » Qalabka Twitter si aad u soo dejiso dhammaan fariimahaaga
Ku abuur Colash Image GNU / Linux.